Deymaha Giriigga oo filaya in laga heshiiyo - BBC News Somali
Deymaha Giriigga oo filaya in laga heshiiyo
Image caption Giriigga ayay tahay in uu buuxiyi shuruudo badan ka hor inta aan heshiis laga gaarin barataarka dhaqaalihiisa.
Wasiirka Maaliyadda ee dalka Giriigga Euclid Tsakalotos ayaa sheegay in dalalka ku jira Eurozone ay gaari karaan heshiis dhabbaha u xaaraya in la sii wado lacago dayn ah oo qayb qayb loo siin lahaa dalkiisa, laakinse Giriigga laga doonaya in ay cayimaan dhimid dheeraad ah oo ay ku samaynayaan kharashaadka, haddii ay ku guul darraystaan in ay gaaraan ahdaafta xagga maaliyadda ee sannadka soo socda.
Dhanka kalena, wasiirrada maaliyadda ee Yurub oo kulan ku lahaa Brussels ayaa kala xaajooday xukuumadda Giriigga dhaqangelinta siyaasadaha uu Giriiggu balanqaaday inuu ku dhaqmayo si uu u helo kaalmo dhaqaale.
Wasiirrada maaliyadda waxay sheegeen in weli Giriigga looga baahan yahay in uu qaado talaabooyin kale oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha looGu tala galay in lagu daar yeelo hay'adaha dawladda hoos yimaada iyo shuruucda baananka.
Axaddii ayuu baarlamaanka Giriiggu ansixiyey tallaabooyin aan lagu farxin oo dib loogu habaynayo hannaanka canshuuraha iyo lacagaha dadka hawlgabka ah.
Agaasimaha hay'adda qaabilsan deganaanshaha hannaanka dhaqaale ee yurub Klaus Regling ayaa sheegay in uu ku niyadsan yahay in qorshahan baritaarka dhaqaalaha ee Giriigga la ogolaan doono.